Iyo Inotsanangurwa Nongedzo kune HomeKit uye Zvese Zviripo Midziyo IPhone nhau
HomeKit iri kuramba ichikura, imba otomatiki uye imba yakangwara iri kuwedzera kurongeka kwezuva, zvakanyanya zvekuti zvigadzirwa zvemagetsi zvevatengi zviri kutarisa zvakanyanya pazvinhu zvinoita kuti hupenyu hwedu huve nyore uye hune sevatarisi vechokwadi, mune kesi yeApple isu tine Siri ine HomeKit.
Parizvino iPhone Tinoda kuti iwe uzive nesu zvese zvaunoda kuti uzive nezveKeKKit, zvese zvishandiso uye nemikana iyo Apple yekumba otomatiki inopa. Saka, tungamira kumusoro kune yedu chaiyo gwara reKeKKit uye tanga kuvaka yako smart imba ipapo.
Chinhu chekutanga chatichaita kutora chikamu chezvikamu, kutsanangura muchiitiko chimwe nechimwe kuti chimwe nechimwe chezvikamu izvo Apple chinoita kuti zviwanikwe kwatiri chinosanganisira, uyezve kukupa mazano edu kune zvigadzirwa zvinowirirana neKeKKit zvatinoongorora pano muNhau iPhone uye kuti isu tine chokwadi chekuti ivo vanozoita kuti hupenyu hwako huve nyore uye pamusoro pezvose zvaunogona kuishandisa kuburikidza neako iOS uye macOS zvishandiso. Isu tinoendako nezvese zvaunoda kuti uzive nezvazvo HomeKit, iyo yese-mu-imwe imba otomatiki, yakabatana imba uye chaiyo mubatsiri chikuva icho Apple chinopa kune vese vashandisi vayo.
1 Mabhiriji: HomeKit kuenderana
2 Makamera: Chengetedzo zvakare pamunwe wedu
3 Mwenje nemabhuru: Mwenje inotonga muKeKKit
4 Kuvhara: Kuvhura gonhi neKeanKit uye Siri zvinogoneka
5 Plugs: Sarudza kuti unovhura riini uye sei
6 Kumba kwemhepo kutonhodza
7 Kuongorora uye magwara ausingafanire kupotsa
7.1 Inotungamira paKeKKit
7.2 Yakanakisa HomeKit Ongororo
Mabhiriji: HomeKit kuenderana
Nguva zhinji tinogona kuve nemidziyo yakasarudzika isina hukama, iyo yatinogona kudzora zvishoma nezvishoma kuburikidza nekushandisa kwedu Casa. Midziyo iyi haidi Bhiriji, asi haigone kuwirirana neimwe neimwe otomatiki. Kune izvi isu tine zvishandiso zvine basa rekubatanidza uye kudzora zvese izvi zvishandiso. Mukuwedzera, zvizhinji zvezvigadzirwa izvi zvine Inoenderana switch iyo ichatibvumidzawo isu kuti tiwane inoenderana zvishandiso pasina kuenda kuburikidza neKeKKit.
Tine mabhiriji mazhinji anoenderana nerudzi rwechigadzirwa, muenzaniso ndeye Philips iyo ine akasiyana maseru uye magetsi ekuvhenekesa, ayo ayo anowanzoda ako Philips Hue Bridge. Iyo ndiyo nzira yekuona kuti zvishandiso izvi zvinogara zvichishanda, chero kwatiri, uye ivo vanoita zviito zvatakambozvigadzirira. Haasi ese marangi anoda zambuko, kana zvese zvishandiso, asi kunyangwe Ikea inopa isingadhuri renji yekutenda kuzambuko TRADFRI ye chete € 29,99, iyo inogadzira yayo yakazara renji reKeKKit inoenderana smart bulbs nenzira iri nyore. Muchokwadi, iwe unogona kunyange kubatanidza iyo maketeni akangwara ayo Ikea atozivisa kare.
Makamera: Chengetedzo zvakare pamunwe wedu
Iyo kamera ndechimwe chinhu chinonyanya kubatsira munyika yeimba otomatiki, hongu ivo havaigona kunge vasipo munzvimbo yeApple HomeKit. Nehurombo ndiyo inzvimbo yakatambanudzwa, zvinonetsa kuwana makamera anowirirana zvizere neKeKKit kunyangwe paine hukuru hwakakura hwezvigadzirwa zvatinowana, zvisinei isu tinogona kuwana inotonhorera inopa senge D-Link Omna 180 HD izvo zvatakaongorora pano mu iPhone News.
Kutenda kuApple HomeKit isu tichakwanisa kudzora akawanda macamera, senge yakarongwa kuvharwa uye kudzima kwemaawa iwayo patinobuda kana kupinda mumba. Nekudaro isu tinogashira zvakangwara uye zvengwaru zviyeuchidzo (zvine marekodhi) pachigadzirwa chedu icho chinoona kuchengetedzeka kwemusha wedu kana kuongororwa kweiyo diki imba. Kutenda kuKeKeKit isu hatizodi kuiswa kusingazivikanwe kana kugadziridzwa kwakanyanya, kunongova kukwira uye kunakidzwa.
Mwenje nemabhuru: Mwenje inotonga muKeKKit
Kuvhenekesa ingangove chikamu icho isu chatinonyanya kufunga kushandisa kuburikidza neKeKKit, chinhu chiri nyore kuisa girobhu racho rakangwara, tambo ye LED kana chero mhando yechigadzirwa chinonakidza. yemwenje. Tine muenzaniso mu Koogeek, yakasimba inopa zvigadzirwa zvemwenje zvine hungwaru, zvinowirirana neKitchenKit nemitengo yekugogodza, mucherechedzo uyo unopa yakanakisa kukosha kwemari kune vashandisi kana zvasvika kuneKeKKit.
Tinogona kufarira izvi udza Siri kubatidza mwenje wakatarwa, maneja maitiro edu nenzvimbo, pamwe nekusarudza kukwirisa uko girobhu redu rinopenya. Asi kwete zvese zvinofanirwa kuve kwakachena mwenje, isu zvakare tine chikamu chekushongedza senge iyo LIFX Beam yatakaongorora pano mu iPhone News uye izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire zvakasarudzika magadzirirwo nehusingaperi hwemikana uye mavara.
Kuvhara: Kuvhura gonhi neKeanKit uye Siri zvinogoneka
Iwe unogona kunge usina kuzvifungidzira, asi kana chengetedzo yeimba yako inogona kuvimba neKeKKit, senge sensors uye makamera ... Sei tichifanira kusakwanisa kuvhura musuwo wemba yedu neKeKKit? Zvataurwa uye zvaitwa, isu tine nhamba yakanaka yezvishongedzo zvemikova zvakaita sekukiya uye makiyi anonyatso kuenderana neKeKKit.
Muenzaniso ndeye Danalock V3, smart smart iyo yatichakwanisa kuvhura kubva kuApple Watch yedu Kana tichida, kutipa zano rekuti HomeKit kuenderana nekuchengeteka kunogona kusvika papi, isu tinogona saka zvachose kuendesa nemakiyi, kana kutovhura musuwo kure kana tichida. Ehe, kuvhura musuwo usina makiyi yatove mhando yekutenda kune HomeKit uye ichi chikamu che smart smart.
Plugs: Sarudza kuti unovhura riini uye sei
Zviri pachena smart plugs ndiyo yechipiri muhwina muhombe pakati pezvinhu zvinogadziriswa zveKeKKit. Parizvino iPhone isu takaongorora yakanaka yakanaka mawoko plugs, kunyange IKEA iri kuvhura yayo huwandu hweHomeKit-inoenderana plugs pamitengo inodhura.
Nemapulagi akajeka anozoonekwa mune yako Kumba kunyorera, iwe uchave unokwanisa kusarudza kuti riini uye sei kubatidza michina. Chii chimwe, tinogona kusarudza kana tikataurirana nemapulagi kuburikidza neSiri, iyo Apple Watch kana chero chimwe chigadzirwa inowirirana neKeKKit.
Kumba kwemhepo kutonhodza
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tine mashoma mashoma e thermostats anoenderana zvizere neKeKKit, Muenzaniso ndiyo yakakosha renji yezvigadzirwa zvinoenderana zveKeKKit zvine Honeywell kana Eve izvo zvinoshanda zvizere. Midziyo iyi ichaongorora tembiricha, hunyoro uye zvimwe zvikamu zvemumba medu kuti tikwanise kugadzirisa ese paramende kubva kuna Siri.
Izvi zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana zvinogona kuperekedzwa nemaoko mashoma e sensors senge izvo zvinopihwa Elgato Eve, iyo yatakaongorora pano mu iPhone News uye chii ivo vachatibvumidza kuti tigadzirise ma parameter ezvimwe zvese zvigadzirwa nekuda kwehunyoro maseru, anofamba maseru uye ese marudzi eetekinorojizvinoita kuti imba yedu inyatsoita basa.
Kuongorora uye magwara ausingafanire kupotsa
Sezvo isu tichiziva kuti iwe unogona kuve nekusahadzika pamusoro pekushanda kweKeKKit zvakajairika, isu tinokusiira iwe kuongororwa kweizvozvigadzirwa zvakanakisa zvatakasangana nazvo, pamwe neyaKeitKit magadziriso izvo zvinoita kuti iwe uwane zvakanyanya kubva mazviri.
Mashandisiro ekushandisa HomePod neKeKKit
Mibvunzo nemhinduro nezve HomeKit
Mashandisiro ekushandisa HomeKit zviitiko
Yakanakisa HomeKit Ongororo
Evha Kamuri: Kupisa uye hunyoro sensor
Lifx Beam: Iwo akanakisa mwenje wekushongedza weimba yako
Vatauri vane HomeKit: Sonos Beam
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Wekupedzisira mutungamiriri weKeKKit uye zvese zviripo zvishandiso